အနံ့ဆိုးများ ထွက်သော မြန်မာ-ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ကြက်ခြံကို ဖျက်သိမ်းပေးရေး ကြေးနီစီမံကိန်း အနီ?? - Yangon Media Group
ဆားလင်းကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃
လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာ-ဝမ် ပေါင်ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်း မွေးမြူထားသော ကြက်ခြံမှ အနံ့ဆိုးများထွက်သဖြင့် ကြက်ခြံဖျက်သိမ်းပေး ရေးအတွက် စီမံကိန်းအနီး ကျေးရွာသုံးရွာမှ လူထုဆန္ဒလက်မှတ် ကောက်ခံမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ် ကျော်ရွာတံတားတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၏ ကြက်ခြံမှ အနံ့ဆိုးကို ကုမ္ပဏီ ခြံစည်းရိုးနှင့် အနီးဆုံးရှိသော ကျော်ရွာ၊ မင်္ဂလာကုန်းရွာ၊ အောင်ချမ်းစည်ရွာမှ ဒေသခံများမှ နေ့စဉ် ရှုရှိုက်နေရသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ကန့်ကွက်လက်မှတ်များ စုဆောင်းခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ”ကြက်ခြံက ကုမ္ပဏီဝင်းထဲမှာဆိုပေမယ့် ရွာနဲ့ မီတာ ၃ဝဝ လောက်ပဲဝေးတယ်၊ လယ်ထွန်ရင်းနဲ့လည်း အနံ့တွေရလို့ အလုပ် ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြဘူး၊ သူတို့ကတော့ အနံ့မထွက်တဲ့ စက်တပ်တယ်ပြောပေမယ့် မရဘူး နံတာပဲ”ဟု ကျော်ကျေးရွာမှ ကိုနိုင်မင်းအောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါကိစ္စအား ယင်းမာပင် မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်(၂)မှ တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်အောင်မေရီက ၂ဝ၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က ပြုလုပ် သော တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၁ဝ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့ဖူးသည်။
အဆိုပါ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်မလွတ်ကင်းဟူ၍ သိမ်းဆည်းထားသော ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းရှိ မြေဧကများပေါ်တွင် ဝက်ကောင်ရေ ၁ဝဝခန့်၊ ဘဲ ကောင်ရေ ၆ဝဝခန့်၊ ငန်းကောင် ရေ ၃ဝခန့်က၊ ကြက်ကောင်ရေ ၆ဝဝခန့်နှင့်နွားများလည်း မွေးမြူ ထားပြီး ကြက်ကောင်ရေ ၁ဝဝဝ မွေးမြူရန် ခြံများကိုလည်း တည် ဆောက်ထားကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားသည်။
ယင်းကိစ္စကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကမ်ဇာမုံက ၎င်းတို့၏ စီမံကိန်းဝင်းအတွင်း ပြုလုပ်သည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားဖြစ်အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုရလာသည်ဟုမြင်ကြောင်း သတင်း ထောက်များမေးမြန်းမှုကိုထိုစဉ်က ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကြက်ခြံဖျက်သိမ်းပေးရေး ဆန္ဒပြုထိုးထားသော လက်မှတ်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများထံ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
တိုက်ပွဲများ အကြား ပိတ်မိပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး ကယ်ထုတ်ပေးရန် တိမ်းရှောင်စခန်းများနေ အမျ
အောင်လအန်ဆန်အလွန် ပရိသတ်အခိုင်အမာရလာနိုင်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား တီရဲလ်ထန်နဲ့ ကယန်းတိုင်??